TPLF Oo Ugu Baaqday Ciidamadda Dawladda In Ay Isu Dhiibaan Shacabka Gobolka Amxaaradana U Diray Digniino - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Mekelle (ANN)-Getachew Reda oo ah Xubin ka tirsan Taliska Dhexe ee Tigray (TPLF) ee dagaalka kula jira dawladda Federaalka Ethiopia, ayaa ka hadlay xaaladda dagaalka ee xilligan iyo awaamiir ku waajahan shacabka Magaalooyinka Dessie& iyo Kombolcha.
Afhayeenka TPLF, Getachew Reda, ayaa sheegay in Taliska Ciidanka Tigray (TDF) ku dhawaaqay in garoonka diyaaraddaha ee Magaaladda Kombolcha uu mamnuuc ka yahay isu socodka dadka rayidka ah.
Go’aankan wuxuu sheegay in si adag loo dhaqan gelin doono. Sidoo kale, wuxuu sheegay in Taliska Ciidanka Millteriga TPLF, ugu baaqay shacabka ku dhaqan Magaalooyinka gobolka Amxaarada ee Dessie iyo Kombolcha aannay ka cararin guryahooda.
Afhayeenka TPLF, Mr. Reda, wuxuu sidaa ku sheegay war kasoo baxay Taliska TPLF ee dagaalka kula jira Ciidamadda dawladda Federaalka Ethiopia oo taageero ka helaya Ciidamadda Dawladda Ereteria iyo Malayshiyada Amxaarada.
laxidhiidha: Qabsashada Tigray Ee Magaaladda Wadnaha Ee Gobolka Amxaarada Iyo Mucaaradka Oo La Saftay TPLF
Getachew Reda, wuxuu sheegay in shacabka ku dhaqan Magaalooyinka ay kulaalayaan ee Dessie& iyo Kombolcha ku dhqan aannay ka cararin guyrahooda, balse ay albaabada xidhtaan oo ay ilaashadaan hantidooda, isagoo xusay in ay TPLF, dammaanad qaaday naftooda iyo hantidooda, sidaa awgeed aannay ka qixin gurayahooda.
Sidoo kale, ayaa ugu baaqay xubnaha ciidanka ee xukuumadda Abiy Ahmed oo sida uu sheegay “burburay” ay isku dhiibaan ciidamadda qalabka sida ee Tigray.
Hadalka Getachew Reda, ayaa yimi maalin kaddib markii ay Ciidamadda TDF, qabsadeen qayb ka mid ah duleedka Magaaladda Dessie, iyagoo qorshaynaya in ay si buuxda gacanta ugu dhigaan Magaalooyinka Dessie iyo Kombolcha, iyadoo labadanMagaalo oo ahmiyad weyn u leh dagaalka ay ka mid yihiin kuwa dagaalka ugu kulul ka socday dhawrkii bilood ee u danbeeyay gobolka Amxaarada iyo Canfarta ay muddo ku taamayeen Ciidamadda Tigray in ay gacanta ku dhigaan.